Shabeellaha Dhexe - Wikipedia
Shabeellaha Dhexe (; ; dhawaaqa waa gobol ka tirsan 18 gobol ee Jamhuuriyada Soomaaliya, waxa uuna dhacaa Koonfurta Soomaaliya. Gobolkan waxaa mara Webiga Shabeelle iyo Badweynta Hindiya oo dhinac marta. Magaalo madaxda Gobolka Shabeellaha Dhexe waa Jowhar.
Waxay Soomaaliya Kaga taal ama
• Gudoomiyaha Gobolka
21,290.97 km2 (8,220.49 sq mi)
2.1 Dhaqamo Hore
2.2 Degmooyinka Gobolka
3 Caafimaadka, Kheyraadka Dabiiciga & Maamulka
5 sido kale fiiri
Shabeellaha Dhexe deegaan ahaan waxa u badan Beelaha abgaal iyo Gaaljecel qabiilo la dega oo kala ah Jareer Weyne, Moobileen & Hilibi . Abgaal waxaa degaan u ah dhamaan dhinaca Xeebta oo loo yaqaan Deexda. Sidoo kale degaanada ku teedsan Webiga Shabeelle oo loo yaqaan Jiin-Webi ayaa waxaa Beelaha Abgaal si qaas ah ula degan Beesha Jareer Weyne. Dhulkaas oo ah mid baaxadiisu ay ka dheer tahay masaafo ka badan boqol kiilomitir (100 km) ayaa ah degaan ku fiican beerashada.
Dhererka Xeebta Gobolka Sh/Dhexe oo ah inta u dhaxeysa degaanka Ceel-Cade oo dhaca Waqooyiga Caasimada Muqdisho ilaa iyo Tuulada Ceel Bacad laguna qiyaaso masaafo ka badan 230km. Degmooyin xeebeedka Gobolka ayaa ah Warshiikh iyo Cadale iyo tuulooyinka hoos yimaada. Sidoo kale Degmooyinka uu Gobolka Shabeellaha Dhexe ka kooban yahay ayaa ah Jowhar,Jiliyaale, Balcad, Mahadaay Weyn, Cadale, Warshiikh, Raage Ceele, Aadan Yabaal iyo Ruun-Nirgood. Jiliyaale waxa ay dhacdaa dhan qoraxsin ee gobalka waa magaalo istaraatiiji ah oo isku xirto goballada shabellada dhexe, Hiraan, Bay, Bakool iyo waliba shabeelada hoose waa magaalo muhiim u ah ganacsiga xoolaha iyo beeraha ee gobolka,
Waxyaabaha Gobolka Sh/Dhexe laga xusi karo ayaa waxaa ka mid ah in Gobolku uu xuduud la leeyahay afarta Gobol ee kala ah Hiiraan, Sh/hoose, Banaadir & Galgaduud. Shabeellaha Dhexe waxa uu dhanka qorax ka soo baxa deris kala yahay Badweynta Hindiya. Dhaqaalaha Gobolka Sh/Dhexe waxa uu ku xiran yahay Beeraha, Xoolaha & Kaluumeysiga. Waana gobol weyn oo leh bad iyo berri aad u barwaaqo ah. Gobolku waxa uu sidoo kale caan ku yahay in uu ahaa gobolkii ugu horeeyay ee Jamhuuriyada oo bariis lagu beero iyo inuu lahaa Warshado wax soo saar leh sida tan Dharka ee Balcad (SOMALITEX) iyo tan Sonkorta ee Jowhar (SNAI).
Gobolku waxa kale uu caan ku yahay cayaaraha Kubadaha Cagta & Koleyga. Waxaana Dagaalada Sokeeye ka hor Gobolka ka dhisnaa kooxdii la oran jiray Snai(Jowhar) oo ka mid aheyd 10-kii koox ee ka tirsanaa Horyaalka Kubadda Cagta ee Heerka Koowaad(Seria A) & Kooxdii kale ee Kubadda Koleyga ee magaceedu ahaa Somalitex(Balcad). Sidoo kale Xulka Gobolka Sh/Dhexe ayaa sanadku markuu ahaa 1987-dii ku guuleystay Horyaalka Kubadda Cagta ee Gobollada Soomaaliya, ka dib markii koobkii loo dhigay Gobollada Dalka ay cayaartii kama dambeysta aheyd 1 iyo 0 kaga guuleysteen Xulkii ka socday Gobolka Waqooyi Galbeed.
Baaxadda Gobolka Shabeellaha Dhexe oo ah 60,000 km oo isku soo wareeg ah ayaa waxaa Dagaaladii Sokeeye ka hor Gobolka ku noolaa ummad tiradoodu ay aheyd 2 milyan. Laakiin waqtiga hadda la jooggo(2016) ayaa waxa uu Maamulka Gobolka ku qiyaasaa in tirada Shacabka ku nool Gobolka ay gaarayaan 1.5 milyan, kuwaas oo 60% ay yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley ku nool dhanka Baadiyaha.
Taariikhda Gobolka aad ayeey u fac dheer tahay. Waxyaabaha aad loogu lagu xasuusto Gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka mid ah gumeysi naceybka sabab u noqday in Gobolka uu noqdo goobtii ugu horeysay ee lagu la dagaalamo Gumeystihii Talyaaniga, laguna dilo markii taariikhda Soomaaliya ugu horeysay dad shisheeye ah oo u dhashay dalka Talyaaniga, kuwaas oo sanadka markuu ahaa 1875 degmada Warshiikh kaga soo duulay dhinaca Xeebta. Sidoo kale Ciidamo gumeysi doon Itoobiyaan ah oo ku soo duulay Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sanadku markuu ahaa 1905 ay la kulmeen jab iyo halaag, ka dib markii ciidamadooda weerark ahaa lagu jabiyey dagaal ka dhacay degmada Balcad oo waqtigaas loo yaqaaan magaca TEY-TEYLEEY. Halyeeyadii Gumeysi Diidka ee af iyo addin kula dagaalay ciidamada gumeysiga ayaa waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Sheekh Nuur Sheekh Axmed (Sh. Xasan Barsane) oo isaga hogaamiye u ahaa dagaaladii lagu jebiyay gumeysigii taliyaaniga iyo kuwii gumeysi isku dayga itoobiya shekhu waxa uu abaabulay ciidan kabadan 30,000 oo fardaley ah oo uu kula dagaalamay labadi dhan ee weerarka ku soo qaaday dhulka Soomaaliyeed, Sheekh Axmed Sheekh Abiikar Xasan (Sh. Axmed Wacdiyow), Xasan Geedi Abtow iyo qaar kale oo aan halkaan lagu soo wada koobi karin. Waxaa iyadana xusid mudan in saddex Madaxweyne iyo laba Ra’isul Wasaare oo Dalka soo maray ay u dhasheen Gobolka Sh/Dexe.
Gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid yahay Afarta Gobol ee ka tirsan Jamhuuriyada Soomaaliya ee isku darsaday Bad iyo Wabi. Waxa uuna qani ku yahay Kheyraadka Badda, Wax soo saarka Beeraha iyo Dhaqashada Xoolaha. Waxaa intaas Gobolka Sh/Dhexe u sii dheer Ganacsiga iyo Warshadaha. Gobolku waxa uu nasiib u yeeshay inuu noqdo Gobolkii u horeeyay ee lagu beero dalaga Bariiska, lagana dhiso Warshadihii u horeeyay ee uu Dalku yeesho sida Warshada Sonkorta ee Jowhar 1962 iyo Warshada Dharka ee Balcad 1968. Waxaa sidoo kale 1970-meeyadii laga dhisay Degmada Mahadaay Weyn Warshadii Sameynta Rasaasta iyo Hubka.
Xadaaradda iyo horumarka G/Shabeellaha Dhexe waxaa ka mid ah in ka hor Dagaalkii Labaad ee Aduunka uu Gobolku lahaa Tariin Xadiid ah oo isaga kala goosha magaalooyinka Xamar iyo Jowhar. Dagaalada Sokeeye ka hor waxa uu Gobolku sidoo kale lahaa laba Naadi oo ka ciyaara Kooxaha Heerka Koowaad ee Dalka. Waana kooxdii Kubada Koleyga ee laga lahaa Warshada Dharka & Suufka ee Balcad(Somalitex) iyo kooxda kalee Kubada Cagta oo ay maalgelisay Warshada Sonkorta ee Jowhar(Snai). Waqtigii madoobaa ee Dagaalada Sokeeye ay Dalka aafeyeen waxaa aad loogu faa'iiday Dekadihii macmalka ahaa ee Ceel-Macaan iyo Cadale iyo sidoo kale Garoomadii Dayaaradaha ee Cisaley iyo Jowhar.
Caafimaadka, Kheyraadka Dabiiciga & Maamulka
Dhanka caafimaadka Gobolku wuxuu leeyahay ceelal biyood dabooli kara baahida shacabka. Waxaa sidoo kale Gobolka ka jira xarumo caafimaad oo tobaneeyo gaaraya. Inkastoo baahida ku aadan xagga caafimaadka aysan weli kaafin karin xarumaha hadda jira ayaa haddana waxay u muuqataa in si qunyar socod ah ay u sii kordhayaan goobaha caafimaadka iyo takhaatiirta ka howl gasha Gobolka Sh/Dhexe. Taasina waxay la micna tahay in mustaqbalka dhow uu Gobolku gaari doonno isku filnaansho xagga caafimaadka ah.
sidoo kale waxaa jira Farmashiyayaal si gaar ah loo leeyahay kuwaas oo wax wayn ka haqab tiray dhanka caafimaadka waxayna isugu jiraan qaar Jumlo & Tafaariiq
waxaana ka mida Abuu Hureyra Farmashi oo ku yaal degmada Jowhar sidoo kale Al-Ixsaan Farmashi oo qaab Hosbitaal camal u shaqeeya waxaana yaala qalab Casri ah
Tan Macaadinta iyo Kheyraadka Dahsoon ayaa ah halla
aan weli la fara gashan oo u baahan baaritaano hor leh. Waxa kaliya oo ilaa iyo hadda la ogyahay ayaa ah Macdanta Manganiiska (Manganese). Waxaa iyadana marag ma doonto ah in guud ahaan Geyiga Jamhuuriyada Soomaaliya uu dhex ceegaago kheyraad fara badan.
Dhanka is-maamulka Gobolka ayaa ah mid gaarsiisan min degmo ilaa iyo heer tuulo. Dhamaan degaan weynaha Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka jira maamulo iyo kala dambeyn sabab u ah in Gobolku uu leeyahay nabad & xasilooni waarta.
Xagga aqoonta iyo waxbarashada Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ah mid Gobolku uu leeyahay Dugsiyo Hoose, Dhexe & Sare. Waxa kale oo Gobolka ka dhisan Machadyo heerkoodu gaarsiisan yahay ilaa iyo darajada koowaad ee Jaamacada(Bachelor's degree). Waxaana halkaas ka howl gala aqoonyahano iyo macalimiin leh tayo wanaagsan.
Sidoo kale waxaa jiray College-kii ku yiilay Mishinka kaasoo la oran jiray Shabeele Secondaray School arday badane ay wax ku baran jireen waxaana looga imaan jiray degmooyinka Gobolka uu ka kooban yahay.
sido kale fiiri
Somalia entry at The World Factbook
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shabeellaha_Dhexe&oldid=212238"
Last edited on 5 Juun 2021, at 07:49
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Juun 2021, marka ee eheed 07:49.